“Way naga cabsadeen Juventus.”.- – Gool FM
“Way naga cabsadeen Juventus.”.-
(Europe) 17 Abriil 2019. Ajax ayaa xalay tartanka Champions League ka soo reebtay kooxda Juventus iyadoo horey ugu soo qubeysatay Camaaliqada Real Madrid.
Tababaraha kooxda reer Holland Erik ten Hag ayaa ku faanay in Juve ay ka cabsatay kooxdiisa da’yarta si la mid ah sidii Real Madrid.
“Waxaan aaminsanahay in Ajax ay u ahayd habeen aan innaba caadi ahayn, ciyaartoyda iyo dhammaan kubbada cagta dalka Holland,” Erik ten Hag ayaa sidaa ku bilaabay hadalkiisa.
“Waad arki kartay in Juve ay yare naga cabsaneysay sidoo kalena Real Madrid way naga baqaneysay, way adag tahay inaad ka hortimaado hab ciyaareedkeena kubbada cagta, maadaama aan heysano ciyaartooy hibo u leh farsamada wayna adag tahay in cadaadis nala saaro xitaa difaac ahaan.
“Waxaan kaliya oon garaneynaa sida loo sameeyo kulankaas isbad-badelka leh ee cadaadiska ku dhisan.
“Si fiican ayaan u ciyaarnay lugtii hore, sdiaa darteed waxaan qabnay kalsooni iyo waliba dulqaad, waxaana u baahanay inaan qeybta hore ka baxsano cadaadiska Juventus.
“Intii lagu guda jiray waqtiga nasiinada ee qeybta hore waxaan ka wada hadalnay in cadaadis la saaro Emre Can isla markaana ay xiddigaha garbaha ay sameeyaan horey u socod.
“Waxaa furmay masaafooyin bannaan weerar ayaana qaadi karnay, Waqtigaas Juventus waxay ku qasbanaatay inay difaactanto balse 2-1 ayaan ka dhignay dheesha waxaana helnay fursado kale oo badan oo aan gool ku dhalin karnay.”.
Ajax ayaa iminka barxada ku sugeysa cidda ka soo baxda kulanka caawa ee Manchester City iyo Tottenham.
"Man City uma imaan inaan ku guuleysto Champions League.".- Pep Guardiola